Greta Thunberg UN kutaura kunoyeuchidza kwe "vacheche vanokandwa kunze kwevanopinda" kutaura Iraq hondo: Martin Vrijland
Akaiswa mukati Kuparadza Kupandukira, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we24 September 2019	• 20 Comments
Chero ani zvake achiri kuona kuti Greta Thunberg anongori mushambadzi wekushambadzira mutambi, achiri kurarama zvishoma zvakanyanya nemusoro wake kana mujecha. Ini ndinoshamiswa kuona iwo mameseji ari paFacebook kubva kuvanhu vanonyanyo farira mhandara uye vane chokwadi chekuti ndiye mutsigiri anokwanisa kufamba kupasi rese uye kuita zvese zviitwe. Nekuti ivo vari kurwira kuwedzera kwezvematongerwo enyika kusarudza kuchengetedza mamiriro ekunze. Iko kutaura kwepamoyo kweUN (umo Donald Trump anga asipo, asi akangoerekana asimuka) ndiye kirimu pane anotamba dessert.
Iyi mharidzo yakanaka inotenderera pamusoro pechinhu chimwe chete uye ichi ndeichi: Kubatanidza yakanyatsogadzirwa-ruoko rworuboshwe kurwisa kudyidzana, kufunga kurangana, kupesana nekudziya kwepasi rose dzidziso, nyika, kushamwaridzana kwevakadzi uye kuzvitengesa-kutanga kwezvematongerwo enyika; kunzvera upfumi hwenyika, kuitira kuti rudzi rworudyi ruchisarudzwa seboka rine mhosva nevamwe vanhu vese kuti vakwanise kubata chero mhando yekushoropodzwa pamwero mukuru uye wakasarudzika. Greta Thunberg chikamu chemutambo uyo wekuparidzira. Anofanira kutamba nevanhu vari pamanzwiro avo, kuti vagovenga izvo 'ruoko rworudyi' rwekunetsekana (vasingade kuomerera muchibvumirano chemamiriro ekunze e2015)! Masasi anofanira kuvenga vatsoropodzi.
Mataurirwo eUN naGreta Thunberg akabva angotiyeuchidza nezvekutamba kwakafanana neyevanhu vazhinji pa10 Gumiguru 1990, pakauya musikana wechidiki wekuIraq kuAmerican Congress kuzoudza iyo American Congress marongero aSaddam Hussein, vacheche. ndakatsvedza kubva pamadziro epasi pezvipatara pasi. Kana iwe uchida kubata masasi, zvakanaka kuzviita kuburikidza nemukadzi mudiki ane moyo unopa ufakazi. Zvikurukuru musikana anenge akura, nekuti izvo zvinofadza kwazvo pakufunga. Muchiitiko ichi, makore mashoma gare gare, uyu Nayirah aive mwanasikana wemumiriri weKuwait muUnited States. Muchidimbu: chaive chako chakachena kuita. Chiitiko chose chekuparadzira chakamiswa neasenzi yekushambadzira Chikomo & Knowlton.
Hazvina mhosva kuti kangani nhema dzisingadzimiswi (Hungu, nekuti 'zvombo zvekuparadza zvakanyanya') zvinoratidzwa- manyepo), mashesi anoenderera mberi nekutevera zvisingaite nzira dzekuparadzira midhiya.
Tarisa uone vakadzi vaviri pane mafirimu ari pazasi. Ose akakandwa mushe. Zvese zviri zviviri zvekuita. Ndozvatinodaidza: propaganda! Vavariro yacho inogona kunge yakajeka kwauri. Ndino ipfupisa iyo imwezve nguva yako. Donald Trump, mutsigiri weBrexit nemapato ese orudyi-mapapiro (aidzorwa pawns) aifanira kuvaka iro 'kurudyi' chiratidzo ('kurudyi-bapiro' muchiRungu) kuva mutsigiri mukuru. Hupfumi huchabva hwapeputswa uye munhu wese anonongedza zvigunwe zvavo paboka iro rakakura rekushungurudza masutu. Iro boka iro raisada kuita chero chinhu nezvemamiriro ekunze kana zvichidikanwa; zvisinei nekufona kwakadaro kubva kuchizvarwa chidiki (zvinova, zvakangwara zvikuru kupfuura avo vakaoma musoro mari mapere). Iyoyo iri zano rakasarudzwa rakangwara. Inhema. Iri zano rekubata zvakanyatsojeka nemhando dzose dzekushoropodza pamugwagwa wakananga kurunyararo.
Izvi zvinoreva here kuti vanhu avo kurudyi havadi kuita chero mamiriro ekunze? Kwete, iro rinodzivirira mamiriro ekunze ekudzivirira rakabatanidzwa nemaune kune iro remapapiro rorudyi rinopamhidzira kuburikidza nerudzi urwu rwekuparadzira, zvekuti unosafarira iro rakanyatsovaka iro remapapiro erudyi. Chero ani anotsoropodzwa akabatanidzwa neiyo 'kurudyi-bapiro' brand. Uye izvozvo zvinoshanda kwazvo! Masasi anotsamwa! Sezvineiwo ipapo neyavo vacheche vakakandirwa kunze kwevanodzidzira muIraq. Masasi ari kutanga kuvenga VaTrump saka vatsigiri vaTrump nekudaro zita reruboshwe. Uye ndicho chaive chinangwa chaicho. Nezvo, masasi panguva imwe chete vasingafarire mazano avo ese pamusoro pekupesana, "iyo 911 inogona kunge iri rekurangana" uye zvakawandisa zveiyo mhando yekushoropodza yekare yakarongedzwa kurongeka. Mumoyo wako unobatana nekutsamwa kwekuita kwaGreta Thunberg. Kuparadzira smart!
Kufunga kwakashata hakuna 'kurudyi' ('kurudyi-bapiro'). Yakave yakaiswa chiratidzo kune vezvenhau uye vezvematongerwo enyika (vatambi). Iko kushambadzira kwakachena, uko munhu wese anofunga zvakanyanya zvakabatana neiyo brand. Ndidzo nhema hombe! Vezvematongerwo enyika uye vezvenhau mishini yekuparadzira. Iyi inguva yekupedzisira pakupedzisira; usambofambe uchienda kunovhota zvakare uye unonyarara mapepanhau ese, TV uye radio. Dzivisa yako TV tambo, dambura yako kunyoreswa kwepepanhau. Unofarira kutsigira kurwisa kuparadzira uye nhau dzenhema nekuve nhengo ino saiti.
Source chinyorwa listings: Chemuportal.org
Tags: 2015, Donald, nechemumoyo, Featured, Greta, Gretha, chibvumirano chemuganhu, Paris, nhaurwa, Thunberg, Trump, un, vn
24 September 2019 pa 08: 39
Mwana anotyisa uyu Trekpop weRuboshwe Fascist Elite.
Wese munhu anofanira kuona kuti huwandu uhwo 100 ndeye% Fake, achangobuda mum diapura.
24 September 2019 pa 08: 55
“Inzvimbo inofanirwa kuzivisa mwana kuti ive pfuma yakakosha kwazvo yevanhu. "Chero bedzi hurumende ichizoonekwa seyishandira kubatsira vana, vanhu vanotsungirira nemufaro chero kupfupiswa kana kusununguka uye chero kutorerwa." - Adolf Hitler.
24 September 2019 pa 10: 57
Pasi peiyo YT vhidhiyo
5 maawa apfuura (akagadzirwa)
Nekuda kweizvozvo mumwe munhu anotenga dumbu kana mbudzana. "
Ah iwe unomboziva, iwe zvakare une vabereki vanobvumira vana vavo kuti vaite mumitambo pamwe naPaul de Leeuw, vaidane iyo kutijeje izita, kushungurudzwa kwevana.
24 September 2019 pa 11: 33
Ini handibatanidze kuti Greta, kana ari musikana, afamba chirongwa cheMonarch ...
24 September 2019 pa 11: 58
Ndinoziva 99,9% chokwadi
24 September 2019 pa 12: 07
anovaona achibhururuka chaizvo pa2: 47, iwo chete maspiritu ayo ega kana aine mic muruoko rwake isinganyatso kukwana. Salmon tart!
24 September 2019 pa 18: 19
Uyezve mubvunzo unotevera kubva kune mumwe munhu kuburikidza neemail kubva ku Facebook peji rangu:
"Mhoroi, madii chinyorwa nezve Greta Thunberg?" Zviri nyore kuita kubatana naye uye Svante Arrhenius nebasa rake pane greenhouse athari kana Nobel Institute (Alfred Nobel) Kana zita Carl Peter Thunberg, freemason? Zvakaoma kuwana chero chinhu nezvazvo.
Kana Luisa-Marie Neubauer uye Iyo imwe nheyo yakatsigirwa naBill Gates naGeorge Soros
Mamiriro ekunze anofora musi weChishanu (Chishanu cheRamangwana) FFF 666 sezvakaita 'Reichsparteitag' ”
“Nekuti izvo zvaizongotorwa sedzimwe zano rekurangana. "Ndakatsanangura chinangwa chekusvitswa kwemukadzi uyu (pamwe achangoerekana avekunyepedzera) nyaya yangu."
Zvinogona kuve pachena kuti pachena mazano anogadzirwa mune akadai PsyOp mashandiro, aireva kutumira vanoshora yakajekeswa zvakajeka 'kutsvaga nzira'.
Isu hatisi saka kutora chikamu kwechinguvana. Ini ndinomira nepfungwa yangu yekutarisa yakanyatsogadzirwa uye nehana yakavakwa zita 'kurudyi' ('kurudyi-bapiro') uye basa reMarionette Thunberg kupomera boka iri (uye zvine hunyanzvi zvakavakirwa stigma).
24 September 2019 pa 18: 21
Uye hongu, iwe unoverenga icho icho: "pamwe kamwe mukomana".
Ini ndinodaro nekuti kazhinji PsyOp mashandiro ane rimwe rekuwedzera dura. Ini ndinofungidzira kuti Greta achashumirawo transgender manyepo ajenda.
Leila Honig akanyora kuti:
24 September 2019 pa 18: 38
24 September 2019 pa 20: 36
Dhimoni kana kuti ndinofanira kuve nemwana anovhiringidzika mupfungwa akaratidza kumeso kwake chaiko kwakazara nekuvenga nekusafadza nekuti nyika haigoni kudzorwa zvakananga. Zvavanotaura pamusoro pehucheche hwake hwakarasika uye kuyaruka zvinoratidza zvakajeka kuti akasungwa uye akabatwa mukunyepedzera kwake. Aya mamiriro ezvinhu ave kunetsa zvekuti haachagona kufunga zvakanaka. Kubvumira uyu mwana kuita munhandare isina gwara chairo kunouraya hupenyu hwake nekutenda kwakasimba kwekuti achazofa. Ini ndinobata vese vezvematongerwo enyika, vabereki uye vezvenhau vane mhosva yeizvi. Kufungidzira kwakadai kwakadzokororwa kakawanda. Iyo acid acid, Al Gore, etc. Chikwata cheRome, chimwe chezvikwata zvikuru zvemapoka, chinotangisa chirevo chitsva makore mashoma mashoma ezvematongerwo enyika anobva asvika pakubata nekuyamwa vanhuwo zvavo.
24 September 2019 pa 20: 40
Iwe unoipa iyo yakanyanya kukosha zvakanyanya mumaonero angu. Musikana ari kungoita nezvekupihwa basa.
25 September 2019 pa 02: 03
imwe clown pano, inouya ff ine ndege yekutaura nezve CO2 emissions muAmsterdam. Musangano wevhidhiyo wanga usiri mhinduro here? Chii hoot .. 😀
25 September 2019 pa 10: 57
tarisa vana vayo iyo nguva iyo shepecpecker, yakakura saucers zvinoita sekunge imhaka yemwenje.
25 September 2019 pa 16: 34
Kuita kunobhadhara vadikani
Greta Thunberg anohwina $ 83,000 'Zvimwe Nobel Prize' ye 'kukurudzira zvinodiwa zvematongerwo enyika kuti zviitike mamiriro ekunze'
25 September 2019 pa 23: 13
Ehe, hapana kushomeka kwevatambi, mahara makadhi uye iwe unobata chimwe chinhu parutivi. Soros nema NGOs ake achange ari busy kukumbira uye kuendesa mari.
26 September 2019 pa 09: 12
Ndokwomuzvarirwo kuti munhu akajairwa kuti ashungurudzike. Hondo yaSatani yemakungu, vatambi, vezvematongerwo enyika uye nevamwe vashandi veChiratidzo havana kuzombodzikama. Mufungo wangu ndewekuti: Dzidza nzira yeku zigzag kuburikidza nehupenyu huno hwaunofanira kuyambuka nekuda kwechimwe chikonzero. Kuseka idiots uye yambira vana vako!
26 September 2019 pa 11: 27
Ini ndinobvuma zvizere! kunyanya vekupedzisira, munhu anyeverwa
zvichiri kuverenga zviviri.
28 September 2019 pa 17: 34
Zvinosemesa mashandisiro anoita mwana uyu pakupararira kwemamiriro ekunze. About 80 makore apfuura taive nemuvakidzani wemacheke akashandisawo vana nekuda kwenhema ...
29 September 2019 pa 23: 09
Iyo € 4 miriyoni yacht iyo Greta akafamba nengarava kuenda kuUSA, yaive yacht yemhuri yeRothschild, akaiisa kuGerman tycoon Gerhard Senft. Co-kaputeni rwendo rwacho aive Pierre Casiraghi, muzukuru kana Monaco anonoka Prince Rainier III uye mutambi Grace Kelly.
30 September 2019 pa 09: 51
tsaru yekare ichiri kushanda
« Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wiersum uye zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?
"Zviripo sezvatinozviona" bhuku Martin Vrijland parizvino riripo »
Total Visits: 13.083.360